डर र ध:म्कीमा हिजो कुरा लुकाएकी थिए भन्दै रेविकाले आज खोलि पोल (भिडियो सहित ) – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /Video/डर र ध:म्कीमा हिजो कुरा लुकाएकी थिए भन्दै रेविकाले आज खोलि पोल (भिडियो सहित )
डर र ध:म्कीमा हिजो कुरा लुकाएकी थिए भन्दै रेविकाले आज खोलि पोल (भिडियो सहित )
उत्पन्न परिस्थितिले झन त्यो घटनालाई रहस्यमय बनाएको छ । एकातिर त्यो भिडियामा कु टाई खाने मेरो छोरी कल्पना चौधरी हो भन्दै आमा मिडियामा आएकी छन् भने अर्कोतिर कु टाई खाने म हो भन्दै रेविका विश्वकर्मा मिडियामा छन् ।
छोरी माघ ४ गते देखि हराईरहेका कारण कल्पनाको आमाले खोजीका लागि प्रहरी प्रशासन र मिडियामा गु हार माग्दै आएकी थिइन् । तर कल्पनाको कतै पत्ता लागेको थिएन । तर अकस्मात उनले एउटा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको देखिन् । त्यो भिडियो हेर्दा उनलाई कु टाई खाने आफ्नो छोरी हो भन्ने लाग्यो । त्यो किशोरीले लगाएको लुगा, जुत्ता लगायतका कुरा सबै मिल्थ्यो । घरवाट निस्कदा आफ्नो छोरीले जे लुगा लगाएको थिइन् त्यही लुगा र हुलियाको किशोरीलाई ६ जनाले गरेको देखेपछि उनी अ’त्ता’लिँदै फेरी मिडिया र प्रहरी प्रशासनको ढोका ढकढक्याउन पुगिन् ।
अहिले त्यो भिडियोमा देखिएको केटीलाई लिएर दुई पक्षबीच आफ्नो आफ्नो दावी प्रस्तुत भइरहेको छ । कल्पनाको आमाले कु टाई खाने किशोरी आफ्नै छोरी भएको र त्यो घटनालाई लुकाउन नयाँ घटना बनाइएको दावी गर्दै महानगरिय प्रहरी कार्यालय टेकु पुगेकी छन् । यता दमकवाट भिडियो प्रस्तुत गर्नेहरुले भने त्यो किशोरी कल्पना होइन रेविका हो भन्दै रेविकासंगको अन्तरवार्ता सहितको भिडियो सार्वजनिक गरीरहेका छन् । जसका कारण भिडियो हेर्नेहरु नै कन्फ्युज भइरहेका छन् ।
हिँजो दमकवाट सार्वजनिक भएको भिडियोमा आफुलाई कु ट पि ट गर्ने साथीलाई माफि दिइसकेको बताउने रेविका आज फेरी बोली फेरेकी छन् । उनले आफु हिँजो डरका कारण केही बोल्न नसकेको र अहिले आफुलाई गर्नेलाई कानुुनी कारवाही हुनुपर्ने माग लिएर फेरी मिडियामा आएकी छन् । रेविकाले आफ्ना साथीहरुलाई जेलमा प्रहरीले नलैजाओस् भनेर आफुले हिजो झुटो बोलेको बताइन् । आफुले साथीलाई बचाउन नै ला गू औ ष ध प्रयोग गर्ने गरेको पनि बताइन् । साथीहरु आफुसंग आएर रोएका कारण उनीहरुलाई बचाउन झुटो बोलेको पनि बताइन् । रेविकाले आफुलाई ६ जना साथी मिलेर गरेको बताइन् ।
भारतिय जि टिभीले नेपाली गायक प्रितम आचार्यलाई नेपाली गीत नै गाउन नदिएपछि (भिडियो हेर्नुस)
बिराटनगरपछि दमकमा पाँच रुपैयाँमै भात,१० रुपैयाँमा मासुभात,मिर्गौला पिडितलाई सहयोग गर्न यस्तो अभियान (भिडियो)
‘मेरो बुवाबाट गल्ती भयो’ कमला घिमिरेले माफी मागिन् ! बुवाको बानी खराब थियो ! अब अमृत सापकोटा र कमला नछुट्ने (भिडियो हेर्नुस)